Ahoana ny fampidinana lohahevitra ho an'ny MIUI, ao anatin'izany ny MIUI 10 | Androidsis
Firy aminareo no manontany ahy amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy samihafa, ny hevitry ny bilaogy ary ny fantsona YouTube mihitsy raha misy fomba ahafahana manao izany. mametraka lohahevitra ao amin'ny MIUI aorian'ny fampandrenesana ny fampiharana na famerana izay miseho amintsika izao milaza fa ny fampiharana Themes napetraka ho default ao amin'ny Xiaomi dia tsy mifanaraka amin'ny faritra misy antsika intsony; Androany dia nanapa-kevitra ny hamorona an'ity karazana fampianarana video azo ampiharina izay asehoko anao ity aho ny fomba hiverenana amin'ny ara-dalàna amin'ny fampiharana ny Tema Xiaomi, amin'izay avy aminy ary tsy mila misintona lohahevitra ivelany, azontsika atao ny mampiasa azy io indray toy ny fanaontsika hatrizay misintona lohahevitra ho an'ny MIUI amin'ny fomba ofisialy.
Tutorial video izay anoro anao anao hojerenao manan-kery ho an'ny kinova MIUI10 farany sy ho an'ny kinova taloha ny sosona fanaingoana izay tonga amin'ny toerana misy anao ao amin'ireo faran'ny marika marika sinoa malaza.
1 Mamitaka ny fikafika amin'ny kinova MIUI rehetra, na MIUI 10 aza
Mamitaka ny fikafika amin'ny kinova MIUI rehetra, na MIUI 10 aza
Ny lohahevitra CM Fake dia ampiharina amin'ny Mi6 miaraka amin'ny MIUI 10
Ny tetika hanarahana raha ampidino ny lohahevitra MIUI ary apetraho amin'ny terminal Xiaomi ary mba hahafahana mampivadika mivantana indray ilay magazay lohahevitra eo amin'ny birao malalantsika ankoatry ny fametrahana MIUI, dia tsotra toy ny miditra amin'ny fikirakiran'ny fitaovantsika izany, midina amin'ny fizarana System sy ny fitaovana ary miditra amin'ny Safidy Safidy fanampiny:
Raha vantany vao tonga any isika dia tsy ampy afa-tsy izay tsindrio ny safidin'ny Faritra ary fidio ny faritra izay tsy ao anatin'ny Vondrona EropeanaAmin'ny ohatra azo ampiharina asehoko anao amin'ny horonan-tsary, dia nisafidy ny hisafidy ny faritra Korea Atsimo, faritra niasa ho ahy nefa tsy nisy olana hatramin'ny nanombohany ny safidy herinaratra tamin'ny voalohany ampidino ny lohahevitra MIUI avy amin'ny fampiharana Themes natokana ho azy izay miseho amiko indray eo amin'ny birao lehibe an'ny Android.
Vantany vao nipaoka ny isika Fivarotana temotra ofisialy Xiaomi fampidinana hira maro araka izay tadiavinay, (Lohahevitra fenoina, sary an-tsary sy horonan-tsary)Azontsika atao izao ny miverina amin'ny toeran'ny Xiaomi antsika ary mifidy indray ny faritra marina misy antsika, raha ny amiko Espana.
Fampidinana ny lohahevitra amin'ny Mi6 avy amin'ny Themes App ofisialy miaraka amin'ny MIUI 10
Amin'ny fanaovana an'io Ny fampiharana Themes dia hanjavona ao amin'ny birao lehibe an'ny Xiaomi na dia hanohy hanana izany safidy izany aza isika ao anatin'ny sehatr'asa, dia nikatona indray mba tsy hahafahantsika misintona lohahevitra vaovao, na dia miaraka amin'ireo lohahevitra izay efa nalainay teo aloha aza tamin'ity fika tsotra ity azontsika ampiharina rehefa tiantsika.
Izany no mora sy tsotra ny havela tanteraka ary tsy misy fetra ara-jeografika ny fampiharana lohahevitra Xiaomi hampidina ny lohahevitra MIUI ankafizinay.
Fanamarihana: Na dia ireo lohahevitra miseho amin'ny fampiharana aza Rehefa misintona azy ireo avy amin'ny MIUI 10 isika dia mahita fa tsy mifanaraka amin'ny kinovan'ny MIUI izy ireo satria mety hanimba ny sosona MIUI 10 izy ireo, araka ny asehoko anao amin'ny horonantsary fa manan-kery tanteraka ho an'ny MIUI 10 izy ireo na dia tsy mihatra amin'ny faritra rehetra ao amin'ny rafitra aza, ohatra, ny fiovana dia tsy mihatra amin'ny ridao fampandrenesana na fampiharana toa izany. toy ny kajy, na dia mifanohitra amin'izay aza miasa tanteraka eo amin'ny birao, ny sary masina, ny fikirakirana, ny dials ary ny mailaka na ny app an'ny famantaranandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba fampidinana lohahevitra ho an'ny MIUI, ao anatin'izany ny MIUI 10
Maricarmen Casabella dia hoy izy:
Salama Francisco! Lahatsoratra tsara, toy ny mahazatra! Fanontaniana iray no tadiaviko aminao, ny fanetsehana ny Faritra, mety ihany koa ve raha manavao antsika miui20 isika? Mi Max ny findaiko 2. Mbola tsy nahazo ilay miui 10 miorina amin'ny OTA aho.
Valiny tamin'i Maricarmen Casabella
Raha mametraka india ianao dia afaka misintona endritsoratra litera samihafa